7,2 dhulgariir ayaa ruxay Nicaragua isagoo sugaya imaatinka Otto | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Infobae.com
Dhulgariir xoog leh, oo cabirkiisu yahay 7,2 oo ah qiyaasta Richter, ayaa laga dareemay Nicaragua iyo waddamada deriska ah, kuwaasoo u diyaar garoobayay imaatinka Duufaanta Otto. Masuuliyiinta Nicaraguan waxay soo saareen a xaaladda degdegga ah, Waxayna ilaalinayeen xeebaha galbeedka digniinta suuragalka ah ee tsunami taas oo, nasiib wanaag, dib looga laabtay dhowr saacadood kadib.
Dowladdu waxay horey u soo saartay digniin casaanka loogu talagalay imaatinka dhow ee Duufaanta Otto, oo gaartay qeybta 2 sida ku xusan warbixinta ay soo saartay Xarunta Duufaanta Qaranka ee shalay. Duufaanta waxaa loo tixgeliyey inay tahay "duufaan khatar badan leh"; sikastaba, waxaa lafilayaa in dhawaan hoos udhacdo.
1 Dhulgariir ka dhacay Nicaragua: aad u daran, laakiin aan waxyeello ka soo gaarin qoomamaynta
2 Duufaantii Otto: halkee ku sugan tahay hadda
Dhulgariir ka dhacay Nicaragua: aad u daran, laakiin aan waxyeello ka soo gaarin qoomamaynta
Xarunta xudunta dhulgariirku waxay ahayd Usulután, oo ku taal El Salvador, oo 100km u jirta caasimada. Wuxuu soo galay 12.45:XNUMX (waqtiga maxalliga ah), iyo laga dareemay Guatemala ilaa Costa Rica. Haddayna intaas ku filnayn, Shan afarta dhulgariir ee culeyska 4 iyo 5 ayaa sidoo kale lagu duubay aagga xudunta. Waqtiga qoritaanka maqaalkan, Lama soo sheegin wax dhaawac ah ama dhimasho ah.
Wasiirka Deegaanka iyo Kheyraadka Dabiiciga ee Salvadoran, Lina Pohl, wuxuu ka codsaday dadweynaha inay is dejiyaan intii suurtagal ah oo ay iska ilaaliyaan isticmaalka taleefannada illaa loo baahdo. Dowlada ayaa sidoo kale amar ku bixisay in dadka degan dhulka xeebta ay ka fogaadaan xeebaha.
Duufaantii Otto: halkee ku sugan tahay hadda
Otto hadda waxay ku taal xeebta galbeed ee Costa Rica, Meel nasiib daro ay sababtay dhimashada ugu yaraan hal qof isla markaana ugu yaraan lix qof oo kale la la’yahay. Madaxweyne Guillermo Solís wuxuu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in xilligan la joogo uusan qiyaasi doonin tirooyinka suuragalka ah. "Waxay u tahay maalin murugo Costa Rica."
Dabaylaha Otto ee xoogan, oo in ka badan 150km / saacaddii, waxay geedo ku soo daayeen guryaha, roobabkiina mahiigaanka ahaa waxay buux dhaafiyeen magaalada Upala., oo xuduud la leh Nicaragua, oo ay ku nool yihiin ilaa 17.000 oo qof.
Sheekadan murugada leh ayaa aakhirkii soo afjartay. Otto waxay ka soo gudubtay duufaan inay noqoto duufaan kulaylaha, waxaana la filayaa inuu xeebta ka fogaado saacadaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » 7,2 dhulgariir ayaa ruxay Nicaragua iyaga oo sugaya imaatinka Duufaanta Otto